बालुवाटार जग्गा काण्ड: गृहले दियो प्रहरीमा किटानी जाहेरी, कोको परे ? « Himal Post | Online News Revolution
बालुवाटार जग्गा काण्ड: गृहले दियो प्रहरीमा किटानी जाहेरी, कोको परे ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २ फाल्गुन ०७:४९
काठमाडौं- बालुवाटार जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा जाहेरी पठाएको छ।
सरकारका तर्फबाट गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको हो। ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको यो पहिलो घटना भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जाहेरी पठाइसकेको बताए । तर, उनले को–कोविरुद्ध किटानी जाहेरी छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् । यो प्रकरणमा बिचौलियाबाट सरकार नै ठगिएको भन्दै मुद्दा दायर हुन लागेको हो।